चुक्यो सरकारः डेंगु नियन्त्रण बाहिर, ६० हजार कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल, साँझसँगै टिपरको कब्जामा काठमाडौं – Makalukhabar.com
चुक्यो सरकारः डेंगु नियन्त्रण बाहिर, ६० हजार कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल, साँझसँगै टिपरको कब्जामा काठमाडौं
मकालु खबर	 २०७६ भाद्र २८ ०७:१२ मा प्रकाशित 78 0
भदौ २८, काठमाडौँ । आजको पत्रपत्रिकाहरुले फरकफरक विषयलाई आफ्नो फ्रन्ट पेजमा मूख्य समाचार बनाएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा ‘गरिबीले लिँदै ज्यान शीर्षक’मा समाचा छापेको छ ।
वीरेन्द्रनगरको कालुञ्चोक क्षेत्रमा घरजग्गा । साथमा श्रीमती र दुई छोरी । साने र सुखी परिवार तर डेढ वर्षअघि २५ वर्षको उमेरमा धनबहादुर खासुमगरले आत्महत्याको बाटो रोजे । कारण थियो गरिबी ।
छिमेकीका अनुसार धनबहादुरले घर निर्माण गर्दा एक सहकारी र विभिन्न व्यक्तिबाट ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ‘आम्दानीको अरु माध्यम थिएन, ऋणको ब्याज बढ्दै गयो,’ दिदी हरिमाया श्रीसले भनिन्,’ त्यही पीरले झुण्डिएर आत्महत्या गरेछ ।’
कान्तिपुर दैनिकले नै लेखेको छ,‘प्रतिस्पर्धाविनै सामान खरिद’ शीर्षकमा । माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्तीसम्बन्धी सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको हो ।
कान्तिपुर दैनिकमा अर्को समाचार छ ‘गृहमन्त्रीका भाइले किन भेटे कैदी ?’ शीर्षकमा । फिरौती संकलनमा सक्रिय भएको अभियोगमा पक्राउ परेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापाले आफूले सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा गएर समीरमान बस्नेतलाई नभेटेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँगको बयानमा थापाले बस्नेतलाई नचिनेको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका इन्स्पेक्टर विपिन ओझाले भने नरेशले बस्नेतसँग जेलभित्रै भेटेको आफूले देखेको बयान दिएका छन् । ब्युरोसँगको बयानमा नरेशले फिरौती संलग्न धन्दाका आठ आरोपीमध्ये तीन जनालाई चिनेको बताएका छन् ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टले ‘डेंगु नियन्त्रणः कहाँ चुक्यो सरकार ? शीर्षकमा समाचार छापेको छ । डेंगुको संक्रमणबाट एक विद्यार्थीसहित ६ जनाको ज्यान गएको छ। झण्डै चार महिनादेखि विस्तारित डेंगु संक्रमण अहिले ६२ जिल्लामा फैलिएको छ। मुलुक डेंगुमय भइसकेको छ। अझै तीन महिना डेंगुको संक्रमण देखिन सक्ने चिकित्सकको अनुमान छ।
अन्नपूर्ण पोष्टले नै ‘साँझसँगै टिपरको कब्जामा काठमाडौं’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । भदौ ८ गते रातको १० बज्दै थियो, सडकमा त्यति चाप थिएन। पुछाङ भोटे अफिसको काम सकेर तीनकुनेबाट बा३८प २३९३ नम्बरको बाइकमा बिस्तारै जोरपाटीतिर लागे। तर उनको यात्रा बीचमै टुंगियो। सडक कब्जा गरेर अन्धाधुन्ध हुइँकिएको टिपरको निर्मम सिकार बने उनी।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘शिक्षामन्त्रीको जोडबलमा चिकित्सा आयोगको उपाध्यक्षमा अयोग्यलाई नियुक्ति’ शीर्षका साचार छापेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेअनुसारको योग्यता नै नपुगेका प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको जोडबलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गिरीलाई नियुक्त गरेको हो ।
त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले ‘६० हजार कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत झन्डै ६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै हाल प्रदेशमा १३ हजार १२८ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कार्यरत छन् ।
राजधानी दैनिकमै ‘संसदीय उपसमिति मेडिकल माफियाको प्रभावमा, प्रतिवेदनबाट एकाएक हटाइयो कार्बाहीको अंश शीर्षकमा समाचार छापिएको छ ।
त्यसैगरी अन्य पत्रपत्रिकाले पनि फरक फरक विषयलाई आफ्नो मूख्य समाचार बनाकएको छ ।
आजको मौसमः पहाडी भू–भागमा भारी वर्षा हुने, पहिरोको जोखिम